ताेखामा पनि सुरु भयो नवरात्री तीर्थ मेला – Jheegu
नेपाली भाषा लिपांगु संस्कृति
ताेखामा पनि सुरु भयो नवरात्री तीर्थ मेला
October 10, 2018 Rekha Shakya	0 Comments
सुविन्द्र श्रेष्ठ (newsoftokha.blogspot.com)
सोह्र श्राद्ध सके लगतै असोज कृष्णपक्ष प्रतिपदाकाे दिन सपनतीर्थ, गौमुखी र दुधमुखी खोलाको सङ्गम स्थलमा स्नान गरेसंगै ताेखामा नवरात्री तीर्थ मेला नौ रथ सुरु हुन्छ । ताेखाका सांस्कृतिक भजन दापा खलः लगायतका बाजा खलःहरु भक्ति गीत बजाएर नौ दिनसम्म झिसमिसे विहानीमा विभिन्न तीर्थ स्थलमा गएर स्थान गरी नवरात्री तीर्थ मेला मनाउनदै आइरहेको छ ।
यस नवरात्री तीर्थ मेलाको अवधिभर हालको ताेखा नगरपालिका अन्तरगत पर्ने तीर्थ स्थलको बारेमा यहाँ चर्चा गर्नु सान्दर्भिक देखिन्छ । नवरात्रीको पहिलो दिन गौमुखी, दुधमुखी र बौमुखी अर्थात कालि गण्डकी, दुध गण्डकी र निलगण्डकी यी तीन खोलाको सङ्गम भएको स्थानलाई त्रिवेणी गंगाको रुपमा रहेको सपनतीर्थमा स्नान गर्ने गर्दछ । यसरी तीर्थमा जाँदा दाफा भजन खलःको पालो परेको घरबाट पूजाको सामाग्री तयार गरी ल्याईन्छ ।
स्नान पश्चात पूजाआजा गरी भक्तजनहरु भजन बजाउँदै ताेखा नगर परिक्रमा गर्ने गर्दछ । नवरात्री तीर्थ मेलामा पवित्र तीर्थ स्थलहरुमा स्नान गरी आफ्नो ग्रहदशा तथा दीर्घायुको कामना गर्दै ग्रहदश पन्छ्याउन पूजा आजा गर्ने दिनको रुपमा लिने गरेको पाइन्छ । यसबाट अाफ्नाे साथै आफ्ना दिवंगत परिवारका सदस्यको मुक्तिको कमना गरी उनीहरुको नाममा पूजा पाठ समेत गर्ने गरिन्छ ।
यसै दिन घट्स्थापना गरिने हुनाले सकेसम्म सपनतीर्थमा स्थान गरी त्यही खोलाको बालुवा ल्याई घट्स्थापना गर्ने गर्दछ । नसके आफुलाई पायक पर्ने खोलबाट बालुवा ल्याएर घट्स्थापना गरिन्छ । यसै दिन ताेखाको तलेजु मन्दिरमा बाह्र थकालीहरुको उपस्थितिमा घट्स्थापना गरिन्छ ।
नवरात्रीको दोस्रो दिन अर्थात दितीयाकाे दिन सिपतं दोंमा रहेको नलि गंगा, दुध गंगा र काली गंगाको सङ्गम भएर त्रिवेणी गंगाको रुपमा रहेको तीर्थमा स्नान गरिन्छ । तेस्रो अर्थात तृतीयाका दिन बाघद्धार तेतिसकोटी देवताले महायज्ञ गरेको स्थलमा र चौथीका दिन बिष्णाप नारायण र बुढानिलकण्ठ नारायण बाट बगेको खोलाको सङ्गम स्थल बलन्ती खाल्डो तीर्थमा स्नान गरिन्छ । साथै यस मेलामा जाँदा ताइनाइं घवाइनाइं एक प्रकारको बाजा बजाइन्छ । यस असोज महिनामा ताइनाइं जातको एक प्रकारको पहेंलाे फुल फुल्ने गर्दछ । त्यसैको नाममा नवराथ लाई कतिपयले ताइनाइं जाने पनि भन्ने गर्दछ ।
पञ्चमिका दिन विष्णुमति गंगा धनधिनकुरेश्वर महादेव खोला र लृरे खोला गंगाको संङ्गम स्थलमा स्नान गरिन्छ । षष्टमीका दिन साङ्गले खोला र विष्णुमति खालाको संङ्गम स्थल मनोहर तीर्थमा स्नान गरी मनमैजुको इन्द्रायणी र फुटुङ्गको महालक्ष्मी दर्शन गरी टोखा नगर परिक्रमा गर्ने गर्दछ ।
सप्तमिका दिन गणेशस्थान जलेश्वर महादेव र धनेश्वर महादेव वारीपारी दर्शन गरी श्री गणेशको पूजा गरिन्छ । अष्टमिका दिन नाट्थेश्वर गुरु र थरलेश्वर महादेवको नाउँमा नासकोय्मा रहेको सपनतीर्थ खोलामा स्नान गरिन्छ । नवमिका दिन टोखा दोभान संङ्गले खोला र सपनतीर्थको सङ्गम स्थल त्रिवेणीमा स्नान गरिन्छ ।
यसरी नौ दिनसम्म चल्ने नवरात्री तीर्थ मेलाको अन्तिम दिन पिगं द्यः, कोथु गणेश, सरस्वती, देम द्यः, नात्थेश्वरी, गणेश, भिमसेन क्वाथ तलेजु मा अलगै पूजा राखी नवदुर्गाको पूजा गरिन्छ । नौ रथ समाप्त हुन्छ सबै देविदेवतालाई कुखुराको फूल र तलेजु भगवानलाई हाँसको फूल चढाइन्छ । र नवयात्री तीर्थ मेला समाप्त हुन्छ ।
एकादशीका दिन तलेजु मन्दिरमा खःद्यः जात्रा मनाइन्छ । तलेजु मन्दिरका बाह्र थकालिहरुको यो जात्रा निकै नै रोचक हुने गर्दछ । यसै दिन जीवित देवी गणेश कुरमारीको समेत जात्रा हुने गर्दछ ।
← बामदेव गौतमया लागि रामवीर मानन्धरया राजिनामा : हत्या लाकि आत्महत्या?
मोहनी नखःया भिंतुना झीस‌ं छाय् धयाच्वना ? सिइकेगु मखुला … →
हिन्दु संस्कृतिको जगेर्ना गर्दै नेपाली समुदायले मनायो यूएईमा ” गाईजात्रा”
July 10, 2018 Rekha Shakya 0